Natawo Mgbaghara mmehie? Kedu etu m gà-èsi nata mgbaghara mmehie site na Chineke?
Ajụjụ: Natawo Mgbaghara mmehie? Kedu etu m gà-èsi nata mgbaghara mmehie site na Chineke?
Azị̀za: Ọlụ Ndịozi 13:38 na-ekwupụta, “ya mere mara nụ nke a, ụmụnna m na a nà-èsite n’ọnụ onye à kwusaa mgbaghara mmehie niile nye ụnụ.”
Eē, ọ dị̀ mfe etu ahụ! Ị̀ pụghị̀ irite mgbaghara mmehie dịka ụgwọọlụ site n’aka Chineke! Ị̀ gaghị akwụli ụgwọ mgbaghara mmehie gị sitere na Chineke. Site n’amara nà ebere Chineke, Ị pụrụ ịnara ya naanị nnara site n’okwukwe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịnabata Jizọs Kraịst dịka Onyenzọpụta gị wèe nara mgbaghara mmehie site nà Chineke, nke a bụ ekpere i nwere ike ikpe. Ikpe ekpere a maọbụ ekpere ọzọ ọbụla agaghị azọpụta gị. Ọ bụ naanị ịtụkwasị obi na Jizọs Kraịst pụrụ inye/iwepụta mgbaghara mmehie. Ekpere à bụ naanị ụzọ iji gosi Chineke okwukwe gị n’ime Ya ma kelee Ya maka ọnọdụ O mè̀̀̀̀̀bèrè maka mgbaghara mmehie gị. “Chineke, amà m na emehiela m megide Gị ma kwesi (ǹtàràm)ahụhụ. Mana Jizọs Kraịst nààrà (ǹtàràm)ahụhụ ahụ̄ kwesịrị m ka o wee bụrụ nà site n’okwukwe nà Ya e nwere ike ịgbaghara m. Ana m etinye ntụkwasịobi m na Gị maka nzọpụta. Ekele dịrị Gị maka amara na mgbaghara Gị dị ebube! Amen!”